Xrar — MYSTERY ZILLION
267 Mobile Devlopment
26 other mobile
July 2009 edited September 2009 in File Request
PageMaker7 လိုမျိုး Xrar ဆိုလား ဘာဆိုလားပဲ (စာလုံးပေါင်းသေချာမသိ )အဲဒီ software ရှိတယ်ပြောတယ် ကောင်းတယ်ပြောတယ် ဟုတ်ပါသလားвЂ¦.. အသုံးပြုပုံလေးရော.... လမ်းညွန်ပါအုံး။ သုံးကြည့်ချင်လို့။ ဒေါင်းဖို့ လင့်ခ် လေးရောနော်вЂ¦
PageMaker7 လိုမျိုး Xrar ဆိုလား ဘာဆိုလားပဲ (စာလုံးပေါင်းသေချာမသိ )အဲဒီ software ရှိတယ်ပြောတယ် ကောင်းတယ်ပြောတယ် ဟုတ်ပါသလား….. အသုံးပြုပုံလေးရော.... လမ်းညွန်ပါအုံး။ သုံးကြည့်ချင်လို့။ ဒေါင်းဖို့ လင့်ခ် လေးရောနော်…
အဲဒီနာမည်နဲ့ အဲဒီလိုသုံးတဲ့ software မျိုးရှိတာ တစ််ခါမှမကြားဖူးဘူး.. ကျွန်တော်ဘဲ မကြုံဖူးတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်.. ဆော့ဖ်တွေက တစ်နေ့နေ့ ဘာတွေထွက်လို့ ထွက်မှန်းမသိဘူး ..
ရှိပါတယ် ကိုဒက်ဘယ်လူ သုံးနေတာပါ။ :d:p
ရှိပါတယ် ကိုဒက်ဘယ်လူ သုံးနေတာပါ။
ဒါဆိုလည်း ပြောပြောထဲဆောပြီး .. ရှာပေးလိုက်ပါလား .. ကိုမင်းသားရယ်.:d. ဒီကတကယ်မသိလို့ပေးစရာမရှိတာ:d သူတောင်းနေတာက မနေ့တည်းကထင်တယ်..
but it's not full version
I saw in full version in rapid shared. but I can't download in this website.
help some ways
Download Link ပေးထားပါ .. ဆိုဒ်အရမ်းမကြီးဘူးဆိုရင် တင်ပေးပါ့မယ်...
August 2009 edited August 2009 Administrators
xara က အများကြီးရှိတယ်ဗျ။ ဘာ xara လည်းမသိဘူး။ google မှာ..
xara 3D site:www.mediafire.com
ဆိုပြီး ရှာလည်းရတယ်။ ဒါမှမဟုတ်
xara 3D site:4shared.com
ဆိုပြီး ရှာကြည့်ပါလား။ xara 3d နေရာမှာ ရှာချင်တဲ့ xara ထည့်ပြီး ရှာကြည့်ပါ။
Mr.Dat Bal Lu
ဘာကွ မောင်မောင် ပ ရင် တာ အေ က ရစ်
ငါမသုံးဘူး နင်ပဲအဲ့ဆော့၀ဲသုံးကောင်းတယ်ဆိုပြီးပေးသွားတာလေ (:(( နင်ပြောတော့
နင်သုံးနေတာနဲ့ကွက်တိပဲဆို ဖန်ရှင်တွေ အင်တာဖေ့တွေ အကုန်မို်ကတယ်ဆို ) မယုံနဲ့သူပြောတာ
သူလက်ရှိသုံးနေတာ သူ့စီမှာ ဖူးဘားရှင်းရှိတယ် ကြည့်လိုက်ပါ
ကျွန်တော့မှာရှိတယ် ဒါပေမယ့် version 1.1 with keygen ကြီးနဲ့ ကျွန်တော်သက်သာအောင်
software လေးပဲရှာထားပြီး keygen လေးပဲထည့်ပေးမယ်လေ
ဥပမာ version 1.1 အတွက် XXA-7110-0846-5218
ဆိုင်တစ်ဆိုင်က ကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းတဲ့ စာမျက်နှာအဖုံးကို pagemaker7 မသုံးပဲ Xrar Software သုံးပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာ။ Xrar3D တော့မဟုတ်ဘူး ဆိုင်ပြန်သွားမေးမလို့ ေ၀းလွန်းတာနဲ့ သွားရမလွယ်တာနဲ့မို့ပါ ဒီမနက်သွားတာဆိုင်မဖွင့်သေးလို့..... ဆက်လက်ကူညီကြပါ